आर्थिक वृद्धिका लागि चीनको अल्पकालीन, दीर्घकालीन नीति – Medianp
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: आइतबार, माघ २७, २०७५१०:०४0
बेइजिङ, चीन, २६ माघ। आर्थिक वृद्धिलाई सन्तुलनमा राख्न चीनद्वारा स्वदेशी कम्पनी तथा फर्मलाई सहयोग गर्ने नीति लिएको अमेरिकी बहुराष्ट्रिय लगानी बैंक, जेपी मोर्गनका प्रमुख चिनियाँ अर्थविद झु हाइविनले बताउनुभएको छ ।
उनले तर चीनको संरचनागत लगानीमा पुनः वृद्धि हुने तर धितो बजार लगानीमा सामान्य अवस्था रहने उहाँले बताउनुभयो ।
तनहुँमा करेन्ट लागेर बालकको मृत्यु
११ वर्षे बालिकाले के लेखेर दिईन शिक्षिकालाई ! जुन पढ्नै नपाई बोलाइयो प्रहरी !
उदयपुरमा रातभरी आएको हावाहुरी र चट्याङका कारण एकको मृत्यु
विज्ञहरुको अनुसार उच्च सतर्कता अपनाउन सके चट्याङबाट बच्न सकिने